सात वाणिज्य बैंकले घोषणा गरे लाभांश, हिमालयनको २६ प्रतिशत कुमारीको ८ अन्यको कति ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सात वाणिज्य बैंकले घोषणा गरे लाभांश, हिमालयनको २६ प्रतिशत कुमारीको ८ अन्यको कति ?
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार यस वर्ष बैंकहरुले ढिलो गरेर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेकोले अन्य प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुँदा लाभांश वितरणमा ढिलाइ भएको हो । “यसवर्ष वित्तीय विवरण सार्वजनिकमा ढिलाइ भयो”, उनले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौसम्मको आम्दानीलाई जोड्न पाउने व्यवस्था पनि गर्‍यो । यी व्यवस्थाले बैंकहरुले समय पनि पाए, त्यसैले पनि यसवर्ष दसैँ आगाडि शेयरधनीलाई लाभांश दिन सकिएन ।” दिपावली आसपासमा शेयरधनीले लाभांश पाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, असोज २१ २०७८ २०:१८:२८
तनुहँमा मात्रै दसैंमा ४ करोड ३९ लाखको खसीबोका बिक्री